Malunga nathi -Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Iimveliso zethu zithobela i-ISO 9001: umgangatho we2015 kunye nemigangatho yobunjineli. Isiqinisekiso se-ISO9001 sisiseko solawulo lwenkampani. Zonke iimveliso zethu ziyasebenza kunkcenkceshelo lokonga amanzi kwezolimo, ifama, ingca kunye nokunkcenkceshela kwegadi.
Sinenethiwekhi yokuthengisa yamanye amazwe enamasebe ama-3 akwamanye amazwe. Uninzi lweemveliso zethu zisasazwa ngokubanzi kumazwe angaphezu kwama-40 nakwimimandla.
Ngelo xesha singakwazi ukunika thethwano iteknoloji kunye nenkonzo unkcenkceshelo drip kunye microspray isisombululo zokunkcenkceshela kubo bonke abathengi.
Sisoloko sinyanzelisa ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kunye nokubeka abathengi phambili. Kule minyaka ingamashumi amathathu idlulileyo, iimveliso zethu ziye zathengiswa kwiindawo ezahlukeneyo China kwaye zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-40 kunye neendawo ezigubungele iYurophu, eMelika, eAfrika, empuma Mpuma kunye Asia.
Wamkelekile ukuba usityelele kwaye uthumele umbuzo wakho.
Yasekwa kumzi mveliso wefilim wezolimo.
Ivelise iseti yokuqala yokunkcenkceshela kumatshini wokunkcenkceshela e-China.
Ukusekwa uvavanyo kunye novavanyo elebhu kwaye yaqala ukubonelela
Iinkonzo zokuhlola kubo bonke abathengi abadinga uncedo
Misela inkampani yesebe eDubai.
Misela inkampani yesebe eHainan, China.
Kutheni Us Mingwang
Yiba nophando lwezenzululwazi kunye neqela loyilo, elizinikele ekuphuhliseni nasekwenzeni iimveliso ezikumgangatho ophezulu kubathengi kwihlabathi liphela.
Singavelisa kwaye sinikeze uluhlu olubanzi lweemveliso zokunkcenkceshela, ezinje ngeTape yeNkcenkceshelo yokunkcenkceshela, uMbhobho waManzi oMkhulu, iTape yokutshiza iMicro, iZilinganisi, iiSpinkler njl.
Ukubonelela ngenkonzo yokumisa kwisampulu, uyilo, imveliso, uvavanyo kunye nenkonzo yasemva kwentengiso.
Iinkonzo zobungcali zokuthumela ngaphandle